သတင်း - လက်သည်းဂျယ်ပန်းချီလုပ်ငန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေ၊ လမ်းကြောင်းများနှင့် အလားအလာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
လက်သည်းဂျယ်ပန်းချီလုပ်ငန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေ၊ လမ်းကြောင်းများနှင့် အလားအလာများကို လေ့လာခြင်း။
A. လက်သည်းဂျယ်အနုပညာလုပ်ငန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်း
အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လက်သည်းဆိုးဆေး အနုပညာသည် အမျိုးသမီးများ၏ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို ပြသရန်နှင့် ကျက်သရေ၊ စိတ်နေသဘောထား၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အလှကို ပြသရန် ဖက်ရှင်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ Gel လက်သည်းဆိုးဆေးအနုပညာသည် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များနှင့် ချမ်းသာသော လူတန်းစားမှ လူအနည်းငယ်အတွက် ခေတ်ဆန်သော ကစားကွက်တစ်ခု မဟုတ်တော့ပါ။ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးများအားလုံးနှင့် ဖက်ရှင်ကျသောမိန်းကလေးများနှင့် ယောက်ျားလေးများပင်လျှင် လက်သည်းပန်းချီလုပ်ငန်းတွင် ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားကြသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်း လက်သည်းအနုပညာလှိုင်းအောက်တွင် လက်သည်းလုပ်ငန်း၏စျေးကွက်သည် အကန့်အသတ်မရှိ “ငွေ” ဟုဖော်ပြနိုင်သည့် ကျယ်ပြန့်လာသည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် လက်သည်းလုပ်ငန်း၏ လည်ပတ်မှုမှာ ယွမ် ၉၅၂ သန်းသာ ရှိခဲ့သည်။ Gel UV လက်သည်းဆိုးဆေးစက်မှုလုပ်ငန်းသည် အလှကုန်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်ဝေစု၏ 2.8% သာရှိသည်။ လက်ရှိတွင် ပြည်တွင်း လက်သည်းလုပ်ငန်း၏ နှစ်စဉ် လည်ပတ်မှုမှာ ယွမ် ဘီလီယံ ၇၀ ရှိပြီး အလှကုန်လုပ်ငန်း၏ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဝန်ထမ်းဦးရေသည် တစ်သန်းထက်မနည်း။ ပုလဲမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည် ဝန်ထမ်း ၃၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းကုန်းမြင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ဤအချက်အလက်သည် ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ လက်သည်းလုပ်ငန်း၏ ယေဘုယျလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
2. အဆင့်မြင့်ရာထူးများ သတ်မှတ်ခြင်း။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်က လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင် အရေအတွက် မြောက်မြားစွာဟု ဖော်ပြနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အများစုမှာ လမ်းဘေးဆိုင်ငယ်များဖြစ်သည်။ အခြေအနေတွေက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပေမယ့် ဆိုင်ရှင်တွေကို ပိုက်ဆံအများကြီးရှာတာကို မတားနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆယ်နှစ်ကြာတော့ ဒီလမ်းဘေးဆိုင်တွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ။ ယနေ့ခေတ်တွင် သင်သည် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ လမ်းဘေးဆိုင်ငယ်တစ်ခုဖွင့်လိုပါက၊ သင့်လက်သည်းဆိုင်သည် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြသနေသည်။လက်သည်းကို UV ဆိုးဆေး အနုပညာသည် အဆင့်အတန်းမြင့်သည့်ဆီသို့ တိုးတက်နေပြီး အကြီးစား၊ တန်ဖိုးကြီး လက်သည်းဆိုင်များသည် ပင်မရေစီးကြောင်းဖြစ်လာသည်။
နာမည်အရ လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်များကို လက်သည်းခြေသည်းထိန်းသိမ်းခြင်းအဖွဲ့အစည်းများအပြင် လက်၊ ခြေဖဝါးထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် အခြားအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကဲ့သို့သော လက်သည်းများပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုကြသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက အဆုံးပဲလား။ မဟုတ်ပါ၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်များသည် လက်သည်းညှပ်ခြင်း၊ လက်နှင့်ခြေဖဝါးထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို နှစ်သက်ရန်သာမက ပရောဂျက်များပြုလုပ်ရန်သာမက ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်း၊ အပန်းဖြေခြင်းနှင့် ဖျော်ဖြေရေးနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းခြင်းများအတွက် နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဒါက အမေရိကန်မှာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ ဒါက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
B. အလားအလာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ Gel UV လက်သည်းဆိုးဆေး စက်မှုလုပ်ငန်း
လက်သည်းပန်းချီသည် ဘယ်သောအခါမှ ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်သလို ဘယ်တော့မှ ပြည့်နှက်နေမည်မဟုတ်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လူအများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် အလှတရားကို လိုက်စားမှုနှင့်အတူ၊ မိတ်ကပ်နှင့် လက်သည်းအနုပညာလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ရန် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ လက်ရွေးစင် အများအပြားကို အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအရ မိတ်ကပ်နှင့် လက်သည်းလုပ်ငန်းတွင် စျေးကွက်မရှိပေ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်ပညာရှင် သို့မဟုတ် လက်ဆေးသမားကို ရှာမတွေ့သောအခါ အလှကိုမြတ်နိုးသော အမျိုးသမီးများသည် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွင် အနည်းဆုံး အချိန်တစ်ဝက်ကို ဖြုန်းကြသည်။ သင့်ကိုယ်သင် လှပချောမောစေရန်သည် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပင်လျှင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ယခုခေတ်တွင် အရေအတွက်၊ UV ge ဖြင့် လက်သည်းပန်းချီl လူတွေက တိုးများလာနေဆဲဖြစ်ပြီး ရပ်တန့်လို့မရတဲ့ လမ်းကြောင်းလည်း ရှိနေတယ်။ တရုတ်လက်သည်းအနုပညာသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်။ အလှအပနှင့် ဆံပင်အလှပြင်ခြင်းကဲ့သို့ လက်သည်းအနုပညာသည် နိုင်ငံ၏ ထွန်းသစ်စလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားလက်သည်းဈေးကွက်သည် စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲမှုစျေးကွက်သို့ တဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာကာ လက်သည်းဈေးကွက်၊ လက်သည်းထုတ်ကုန်လက်ကားရောင်းချမှု၊ လက်သည်းသင်တန်းနှင့် လက်သည်းခြေသည်းလက်သည်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လက်မှတ်အကဲဖြတ်မှုတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် နေရာတိုင်းတွင် လက်သည်းလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အရောင်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ လက်သည်းဂျယ်ဆေးလုပ်ငန်းကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနှင့်။